सिरु डाँडा र डढेलो (लघु कथा) | मझेरी डट कम
सिरु डाँडा र डढेलो (लघु कथा)
shantiram.dhakal — Sun, 11/18/2012 - 03:16
नारायणलाल र रामबाबु सँगै पढे, अनि सँगै हुर्किए । तिनीहरूको जन्म पनि एकै सालमा भएको थियो । दुबैजना छिमेकी थिए, बढ्दै गए । गाउँको स्कूलमा सँगै पढथे । नारायणलाल अलिक छुच्चो स्वभावको थियो गाउँमा कुखुरालाई खेद्नु कसैको बारीमा काँक्रा चोर्नु, बाटो हिड्दा हिड्दै कसैको घरमा ढुंगा हान्नु उसको नित्य कर्म थियो । सिरान घरे राईको घरमा गएर कुखुराको खोर खोलिदिनु चल्लाहरूलाई खेदेर दुख दिनु त्यसको चकचके बानीदेखि सबै दिक्क हुन्थे ।
त्यो बेला बाहुन क्षेत्रीले कुखुरा पाल्नु हुन्न भन्ने मान्यता थियो । कुखुरा सुँगुर पाल्ने जात अनुसार मात्र पाइन्थ्यो अहिलेको पिंढीले सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । त्यो बेलाको सामाजिक संरचना त्यस्तै थियो । बिहान बेलुका बाटो छेउमा घर हुनेहरूले चनाखो हुनुपर्थ्यो । तै पनि सबैले माया गर्थे छुच्चो भएपनि त्यो बाठो थियो अनि त्यस्तै आफू बदमासी नगरे पनि नारायणलाललाई साथ दिएर हिड्थ्यो रामबाबु पनि । त्यहाको स्कूल गाउँको पुछारमा थियो ।
सिरुडाँडा गाउँ घरभन्दा अलिक माथि डाडामा पर्थ्यो । त्यो अति रमाइलो थियो । त्यहाँबाट वारिपारि सबै घरहरू छर्लंगै देखिन्थे । तल गोठहरू त्यो नदीको दोभान अनि त्यसको डिलमा जन्तरे कामीको घर ,वारिपट्टि मिजार माइलाको घर । त्योभन्दा माथि चेलफेत्ती दिदीको घर । अनि सुनारे जेठो लाउरे दाइ, मारपाचे कान्छो, अचार्ज पण्डित अनि साने दर्जीको त्यो घर ।कति सुन्दर थियो त्यो गाउँ । ठुलाघरे अन्तरे, नेवार माल्दाइ, घिसिंग सर, बरबोटे मगर, दण्ड पाणि सुबेदार, छत्रमान मुखिया, शेर बहादुर काजी, लकाई बुढा, आसामे बा, सिक्किमे साल्दाइ,तक्मे ठुलो कान्छो । यस्तै धेरै ओटा परिवारका करिव १२० धुरीहरूको छाना । त्यो सिरुडाँडाको खरले बर्षेनी छाउने गरिन्थ्यो ।
चैतको महिना थियो । एकाबिहानै नारायणलाल अनि रामबाबु त्यो सिरु डांडातर्फ लागेका थिए । त्यो डाडामा पारिलो घाम लागिरहेको थियो । सायद तिनीहरूको कुनै नया योजना थियो । चक चक गर्ने यी फटाहाहरू लागे है उँभोतिर । विचार गर है भन्दै थिए । बाटोमा निस्किएर दण्डपाणि सुबेदार बा अनि थप्दै थिए नेवार माल्दाइर घिसिंग सरहरू पनि आज के उपद्रो हुदैछ भनेर ।
सबै जना गाउँमा आ-आफ्नो बिहानी दैनिकीमा लागे कोही टाट्नामा बाख्रा बान्दै थिए । मार्पाचे कान्छो गोरु निकालेर खेततर्फ लाग्दै थिए, चेलफेत्ती दिदी गाग्रो बोकेर धारातिर लाग्दै थिइन । कोही गाइको गोठतिर ढुङ्ग्रो बोकेर बाछालाई दुध चुसाउदै थिए । अर्थात आफ्नो काममा सबै जना लागि सकेका थिए ।
माथि कालो धुवाँको मुस्लो देखियो । अघि बिताई हालेछन दुईओटा उपद्र्याहरूले । सिरुडाँडामा काट्नलाई ठिक्क भएको खरमा आगो लगाई दिएछन् । एकै छिनमा सखाप भयो त्यो सिरु डांडा । अब यो साल कसैले घरमा छाना फेर्न नपाउने भए । गर्नु गरे मोराहरूले । बरबोटे मगर र ठुला घरे अन्तरे कराउदै थिए - यी मोराहरूलाई अब चैं गाउँ निकाला नगरी भएन ।
यसरी ठुलो उपद्रो भयो गाउमा । भद्र भलाद्मी गाउँलेहरूको बैठक बस्यो । के गर्नु ! गर्नु गरिहाले ! दुई दुई चड्कन दिए लाहुरे दाइले, के गर्नु कुटेर सिरु फर्कने होइन!
अब समयले कोल्टे फेरेको छ । त्यो सालदेखि अहिलेसम्म त्यो सिरुडाँडामा सिरु उम्रिएको छैन । उम्रिए पनि कुनै ढंगसँग बढ्ने सकेन । ती दुई ओटा फटाहाहरूको राज छ सिरुडाँडामा । कोही बोल्यो भने कुटाइ खाइ हाल्छ । उनीहरूले जे बोल्यो त्यही कानून हुन्छ । बाङ्गो रूखलाई बाङ्गो भन्न पाइन्न । पहिले उनीहरूले के भन्छन त्यही भन्नु पर्छ । टनटलापुर् घाम लागेको बेला पानी पर्यो भने हो भन्नु पर्छ । चेलफेत्ती दिदीका कुखुरा दिनेपिच्छे हराउछन । कोही बोल्न सक्दैन, अर्को विचार त्यहाँ राख्न पाइँदैन ।
आजकल त हफ्ता वासुली सुरु भाको छ त्यो सिरुडाँडामा । टोल सुरक्षा भन्दै त्यही नारायणलाल र रामबाबुलाई बुझाउनु पर्छ । यसरी आजित भएको छ त्यो सिरुडाँडा । अनि त्रसित छन् सिरुडाँडाबासीहरू कहिले यस्ता फटाहाबाट मुक्ति मिल्छ भनेर | सिरु डाँडाको डढेलो अब कहिले निभ्ने हो थाहा छैन ।
महेश्वर शर्माको समग्र व्यक्तित्व
चिर्छ मेरो छाती
तीन मुक्तक (जिन्दगीमा कोही)
ठाडो गीत (घासे गीत)
पूपू म्हेन्दो सर्सी तैइला
तीज (शिशु गजल)
हे भगवान तिम्रो रिसले पनि मेरो ज्यान लाने भो
म अदालत जान्न